Umntu uye wonakalisa indawo engqongileyo, uyidla aze atye izinto ezinobungozi ezinzima kakhulu ukususa emzimbeni. Ezi zinto zenza iinkqubo zenkxaso-mzimba emzimbeni, ezikhokelela ekutshintsheni kwezixhobo zezofuzo. Kukho izifo ezingasebenzi kwi-immune system, kwaye umntu ukhula ngokukhawuleza. Ukumisa i-oxidation, kufuneka usebenzise ama-antioxidants. Kule meko, ukunyuswa kwerayisi yaseJapan kuya kunceda, okwenza kube yinto ehlukile. Ilayisi lomdaka ngumthombo wendalo, wendalo, "ophilayo" onokuthabatha amachiza kunye nemveliso yokwenziwa ngaphandle kokulimaza impilo yakhe. Ilayisi lomdaka icebile kuma-antioxidants. Baye kwenkqubo yokunciphisa i-oxidation ukukhusela ukukhululwa kwama-radicals amahhala, kunye ne-coenzyme Q 10, i-chlorogenic kunye ne-N-coumaric acids ezibandakanyiweyo ekunciphiseni inkqubo yokuguga kunye nokunciphisa ikhosi yezifo ezininzi. Ziziphi iingenelo zokusebenzisa le mveliso? Siza kufumana namhlanje! Umxholo wendaba yethu "Iipropati ezisebenzayo zerayisi yaseJapan".
Ilayisi yolwandle yaseJapan laziwa ngaphambili kumaxesha amandulo. EYurophu naseRashiya, wavela eJapan naseTshayina kwiXesti yeXIX. ERashiya okokuqala yayibizwa ngokuba "ngaphandle" ilayisi, njengoko yaziswe evela kwelinye ilizwe. Kamva kwaziwa ngokuba "ilayisi ephilayo" ngenxa yokuba ngokuqwalasela rhoqo ukukhula kwelayisi emanzini, inkqubo yokuphefumula kunye nokukhula kwezidalwa ezincinci kubonakala. Ilayisi lomdaka yinto eyenziwayo xa kwenzeka i-gluing bacteria yamanzi. Ngaphandle, kubonakala ngathi irayisi ephekiweyo. Ulwandle irayisi lunomdla wesinambu-ezinjenge-microorganisms kunye neefungi ezinomshishini oqingqiweyo: aldehydes, iivithamini, i-acid acids, i-alcohols, i-esters, i-enzyme, i-resinous and fatty substances. Iifithamini C, iD kunye ne-enzyme ziquka ukuqinisa ukukhuselwa komzimba, ukukhuthaza inkqubo efanelekileyo yezinto zokuphila emzimbeni nokuthanda ukulahleka kwesisindo.
Kwilayisi zikhona iimpawu ezixhamlayo, ezibizwa nge-fatty acids (Omega-3), ezithatha indawo ye-fatty acid acids (Omega-6). Ama-enzymes equlethwe ilayisi aphule amaprotheni, amafutha kunye nama-carbohydrate emzimbeni, kunye ne-acidi folic isusa amafutha, inxaxheba kwi-protein kwaye ichaphazela ukubuyiswa kwamaseli obomvu. I-Glucuronic acid iphucula umthamo we-metabolism kwi-cartilage yomgudu kunye namalungu. I-protease ye-enzyme iyanqanda iiprotheni ize ichithe iinqwelo zegazi, kwaye i-enzyme i-amylase ifaka isitashi. Kukho umncinci wotywala oselwandle elithintela ukuphuhliswa kwezifo zenhliziyo.
Ukusetyenziswa rhoqo kwerayisi yelwandle kunika iziphumo ezintle kwaye kuthintela ukuvela kwezifo ezininzi.
Iimpawu ezintle zerayisi yaseJapan:
unciphisa uxinzelelo lwegazi;
phucula i metabolism;
inqanda ukuphuhliswa kwe-atherosclerosis;
kukhuthaza ukulahleka kwesisindo;
ikhusela izifo ze-periodontal kunye ne-stomatitis;
kunciphisa umngcipheko wokuphucula izidumbu ezinomzimba;
inefuthe elizuzayo kwimeko yesisu esiswini.
Ilayisi yolwandle yaseJapan ingasetyenziselwa iinjongo zokucebisa. Amathanga okusela, ahlaziye, ahlenga isikhumba aze ahlambulule kwiiseli ezifile. Unokwenza i-lotion kwaye ubhekane nemaski. Ukuba ubahlamba iinwele, ziba zincinci kwaye zenzeke. Ungasebenzisa umsila welayisi wokungakhutshwa komlomo. Xa izifo ezidibeneyo zenzeka, ukuxubha kunye nokuhlamba kufuneka kwenziwe. Yaye ukuba uyongeza kwibhabha xa uhlamba, inciphisa ukukhathala kwaye unike amandla.
Nangona isiselo asikho nengozi, ukusetyenziswa kwayo kufuneka kushiywe kubantu:
kunye nesilonda sesisu sesisu ne duodenum;
nesifo sikashukela (iqukethe iswekile).
Indlela yokulungisa isiselo: iipuniwe eziyi-3 zeshukela ezichithwe kwi-1 litre engabinyibilikiyo, kusekhona amanzi kwaye uthele entleni equlethe i-10 ukuya kwe-15 ierinki kunye neepuni ezi-4 zerayisi yaseJapan. Inika iintsuku ezimbini kwiqondo lokushisa. Emva koko unxinxe kwaye uphuze. Isiselo esilungisiweyo kufuneka sigcinwe kwifriji. Iingqolowa eziseleyo zihlanjululwa ngamanzi asebenzayo kwaye isiphuzo esitsha silungiselelwe. Ulwandle irayisi emva kwamalungiselelo amaninzi okwandiswa ngobukhulu, ngoko kuya kwahlulwa kwaye kugxininiswe kwelinye ibhanki. Thatha ukunyuka kumlinganiselo we-100 ukuya kwi-150 ml ngemizuzu engama-20 ukuya kwe-30 ngaphambi kokutya. Umthamo ongabodwa wabantwana abangaphantsi kweminyaka emithathu - 50 ml. Abantwana abangaphezu kweminyaka emithathu banganikwa i-50-100 ml. Ekubeni eli lirayisi elwandle linamagqabi-enjenge-microorganisms, ukuvuthwa kwalo kuxhomekeke kubushushu.
Ngethuba lokutshisa liwanele malunga nomhla, kwaye ukumnika kuya kulungele. Isiselo esenziwe ngokufanelekileyo singagcinwa kwifriji ezingaphezu kweeyure ezingama-48, kwaye irayisi eyongezelelweyo ingagcinwa kwisitya seglasi ngaphandle kweentsuku ezingama-5. Isiselo esilahlileyo sithandeka kakhulu ukunambitha. Uyangikhumbuza i-kvass eyenziwe. Ucima utyani kakhulu kwaye uthathwa njengesiphuzo esinomsoco. Ukunyamekela ekhaya akudingi umzamo omkhulu wempahla, ixesha kunye nomzamo.
Kwixinzelelo eliphezulu legazi
Yintoni ekudliwayo ukujonga kakuhle
Inzuzo kunye nokulimala kweziphuzo zamandla
Iisobho ezidumile: ingozi okanye inzuzo?
Iipropati eziwusizo ze-flounder
IziHlomelo kwi-caviar ebomvu
Imveliso enempilo kakhulu
Ukupheka kunye neengcebiso zokupheka i-khachapuri
I-pizza epheleleyo kunye nama-mushroom kunye ne-ricotta
Iziphumo zokulungiswa kwelasi
Ubungqina beentlobo ezahlukeneyo zobuso
I-lavender i-muffins ngama-blackberries kunye nama-peaches
Iingcebiso ngenyanga yokuqala yokukhulelwa
Indlela yokufundisa umntwana ukuba aqhube amazinyo?
Kuthekani ukuba ndixhoma i-moles?
Ndimele ndihlambe kaninzi kangakanani iinwele ezinde
Iminyaka eyiyo yokuzalwa komntwana
Indlela yokwenza isivumelwano somtshato
Umculi uDanko wadelela ngokukhohlisa kwinkqubo kaShepeleva
I-Fusilli ene-sauce eluhlaza
Ukhuselo olukhuselekileyo kumkhuhlane nomkhuhlane
Ndikhangele "i-waistcoat" ukuba ndikhale ngomsindo!
Indlela isifuba sesibini esilungiselelwe ngayo